$5အတွက်သာ CV တင်ပါ - သင်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်သည် ယူအေအီး, ကာတာသို့မဟုတ်ဆော်ဒီအာရေဗျ
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇြန္လ 20, 2019
12 ဘုံအမှားတွေခရီးသည်ဒူဘိုင်းက Metro အဆိုပါဒူဘိုင်းက Metro ဒူဘိုင်းအတွက်ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လူကြိုက်များနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်နေတုန်းပါစေသင့်ပါဘူး။ က 2009 ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စတင်အစဉ်အဆက်ကတည်းကအဆင်ပြေလျင်မြန်စွာကူးအပြောင်းရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုတမြို့လုံးအတွက်ခရီးသွားဧည့်, လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေသများအများစုရန်လွယ်ကူရယူခွင့်ပြုထားတဲ့လမ်းကြောင်းစနစ်ကရှိပါတယ်။ ဤသည်ကမြို့ထဲတွင်အသွားအလာရိုက်နှက်များအတွက်တန်ဖိုးရှိသောပို့ဆောင်ရေးရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။ ယင်းမက်ထရိုသုံးစွဲဖို့, သင်စက်တွေတော့အရောင်း, သင်မီထရိုဘူတာရုံလက်မှတ်ရုံးကနေတက်မဝယ်သို့မဟုတ်ထိပ်ဆုံးနိုင်သည့်ခိုင်လုံသော Nol ကဒ်လိုပါလိမ့်မယ်နှင့်ငျ RTA အေးဂျင့်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ခိုင်လုံသောစော်ဘွား၏ ID နှင့်အတူ Metro အသုံးပြုသူများသည်ထိုသို့သောထိပ်တန်း Burj Khalifa မှာအဖြစ်ဒူဘိုင်းရဲ့နာမည်ကျော်ဆွဲဆောင်မှုအချို့ကို Dubai Mall က F & B ကိုဆိုင်များတွင်မှအများအပြားအထူးလျှော့စျေးကိုခံစားနိုငျသညျ, [ ... ]
အကောင်းဆုံးသွားရောက်ရန်နေရာများနှင့် 2019 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ (Source: https://pixabay.com/photos/dubai-cityscape-city-architecture-2369948/) လူအတော်များများအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်များစွာသောဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဆိုဒ်များဒူဘိုင်းသွားဖို့ကိုချစ်။ အတော်များများကထူးခြားတဲ့သောနေရာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွေ့ကြုံခံစားပြန်သွားပါ။ မြောက်မြားစွာဆိုဒ်များနှင့်သင်တစ်ခုတည်းခရီးစဉ်အတွင်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သောလုပ်ဖို့အမှုအရာရှိပါသည်။ ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ, အထိမ်းအမှတ, ထူးခြားတဲ့ဗိသုကာလက်ရာ, မောလ်များနှင့်ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာဒူဘိုင်းအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံပျော်စရာများနှင့်အဆင်ပြေစေရန်အမျိုးမျိုးနေရာများလာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်သိကောင်းစရာများ, သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ကိုရွေးချယ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဤသည်ကိုအလွယ်တကူကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အား enable ပါလိမ့်မယ်။ ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းဖြစ်နိုငျကွောငျးကိုသတိရပါ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထုပ်, နေရောင်ကာကွယ်ဆေးများနှင့်အလင်းပေမယ့်လျောက်ပတ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။ သွားရောက်လည်ပတ်ဗလီကိုသင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာသည့်အခါ [ ... ]
ဒူဘိုင်း: ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏စံနမူနာဒါဟာဒူဘိုင်းဒီ Amazing ရာဌာနတော်သို့ သွား. နေဆဲပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ပါသည်, နေ့တိုင်းဝန်းကျင်မှာအသစ်တစ်ခုပြောင်းလဲမှုရှိကွောငျးယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ဤပြည်နယ်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမခေါ်အရာကိုတစ်ဦးခြွင်းချက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာကိုမည်သို့ပြည့်စုံမြုံ, သဲနှင့်မြေယာ၏စွန့်ပစ်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုယနေ့သောအရာကိုဖြစ်ထွက်လှည့်ခဲ့ဘူးကြောင်းလုံးဝအံ့ဩမိန်းမောပါပဲ။ မည်သည့်အရင်းအမြစ်များနှင့်နည်းပညာမရှိရင်ဤမြို့ကိုထိုကဲ့သို့သောစိန်ခေါ်မှုများမှတဆင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပျံသန်းသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူရှိသူများကိုကျော်လွှား။ ဒါဟာကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ငါက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ကုထုတ်လုပ်ခံရပါကလူအပေါင်းတို့သည်နယ်ပယ်များတွင်ယခုရှိပါတယ်ဒီအရပ်မှီဖို့ပါပြီမယ်လို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့စိတ်ကူးဖို့ကြိုးစားသောအခါအကြှနျုပျကို chills ပေးသည် [ ... ]
ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum အားဖြင့်စေ့ဆော် Quotes
ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum အားဖြင့်စေ့ဆော် Quotes ကျွန်တော်သူ့ဖွဲ့ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum တကမ္ဘာလုံးအဖြစ်ကောင်းစွာနိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများတိုင်းပြည်ပေမယ့်တော်တော်များများကလူကိုသာမှုတ်သွင်းတော်မူသောဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီး၏ဒုတိယသမ္မတများ၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်ပါ။ မိမိအအကြွေးငါးကျော်စာအုပ်များနှင့်အတူတစ်ဦးကအကြီးခေါင်းဆောင်, ကာကမ္ဘာ့အဆင့်မီမြို့တော်သို့ဒူဘိုင်းပြောင်းလဲတဲ့ကြာရှည်ခံအမွေ, သူသူ့ထံမှအများကြီးသင်ယူကြသူအများအပြားအားဖြင့်လေးစားသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူ့ကိုးကားထံမှပညာ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပုလဲတာဝန်ယူထားသောပါပြီ။ "ဟုအဆိုပါလူငယ်ပေါ်မှာငါတို့နိုင်ငံရဲ့အများစုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်မိမိတို့လက်၌တည်ရှိ၏။ ကြှနျုပျတို့စေ့စေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ကိုထောကျပံ့ "" ။ သည်၎င်း၏လူငယ်ဂုဏ်ယူလူငယ်တစ်ဦးတိုင်းပြည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လိမ့်မည် [ ... ]
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇြန္လ 11, 2019
ဒူဘိုင်းမြို့ Amazing ရာဌာနပါ!
ဒူဘိုင်းမြို့ Amazing ရာဌာနပါ! ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲ forward ပြုလုပ်ပေးဖို့ရှာဖွေနေနှင့် The အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေသတင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကမှတ်ပုံတင်ထားသောအဖွဲ့ဝင်များကို update ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကရုပ်ရှင်များ, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပို့စ်တင်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမြှင့်တင်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အမြဲစော်ဘွားမြှင့်တင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲယူအေအီးလူနေမှုပုံစံ, ကျွမ်းကျင်သူများလမ်းညွှန်များ👳နှင့်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစာဖတ်သူများများကိုရှာဖွေနေဘလော့ဂါများ၏ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ⭐⭐⭐⭐⭐အသင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဧည့်သည်များပေးနေကြသည်။ တောင်မှတဦးတည်းလူကြိုက်အများဆုံးဘောလီးဝုဒ်ကြယ်ပွရှာရွတ်ခန်းသူ၏ဒူဘိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ငါတို့နောက်လိုက်ကြာပါသည်။ ထိုသို့သူဒူဘိုင်းမှအခြားသူများအားဖိတျချေါထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အင်ဒီးယန်းမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာအပေါ်သူ့ကိုချစ်ကြ [ ... ]
ဇြန္လ 7, 2019
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇြန္လ 7, 2019
သငျသညျဒူဘိုင်းဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အကြောင်းကိုသိသင့်သောအရာတို့ကိုထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချက်အချာအဖြစ်အများအပြားကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့နာမည်ကျော်နှင့်စမတ်မြို့ဖြစ်၏။ ယင်း၏ 85 သန်းခန့်မှန်းခြေလူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 3% ပြည်ပရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူခေတ်မီမြို့အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေလူတွေအသက်ရှင်နေထိုင်, ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပြောင်းရွှေ့မမြင်စဖူး။ ဒူဘိုင်းခရီးသွားဧည့်မှကြိုဆိုပေမယ်နေထိုင်သူများအဘို့အငြိမ်းချမ်းစွာဆိပ်သာလုပ်ရသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စနစ်များသင်တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရှေ့၌သင်တို့အခွင့်အရေးများကိုသိနားလည်သင့်ပါတယ်ဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ပေးသောဥပဒေများဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်, ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်သင်ရှာတွေ့ကိုမဆိုကဏ္ဍနေကြသည်။ အလုပ်သမားအုပ်စုများသို့သော်ယူအေအီးအလုပ်သမားဥပဒေများသူတို့သေချာဖို့လုပ်သားအင်အားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်ကိုဂရုစိုက်, ဒီမှာကအရမ်းလူကြိုက်များမဟုတ် [ ... ]
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇြန္လ 3, 2019
အာရပ်နိုင်ငံများကဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့နိမ့်ဆုံးရာဇဝတ်မှုနှုန်းများထဲမှရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိစစ်တမ်းများတွင်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေး, ရာဇဝတ်မှုအပေါ်အနိမ့်ဂိုးသွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့နိမ့်ဆုံးရာဇဝတ်မှုနှုန်းများထဲမှရှိပြီး, 2018 အတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဋ္ဌမ-လုံခြုံဆုံးမြို့အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ လုံခြုံရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစည်းမျဉ်းအေဂျင်စီခြောက်လအမျိုးအစားသို့ပြစ်မှုများခွဲခြား။ ဤရွေ့ကားရာဇဝတ်မှုများကိုခိုးမှု, အတင်းအဓမ္မလုယူခြင်း, ပြည်တွင်းဖောက်ထွင်း, လိမ်လည်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည်။ ပင်လယ်ကွေ့သတင်းများနှုန်းအဖြစ်, ဒူဘိုင်းရဲကဒူဘိုင်းအတွက်ရာဇဝတ်မှု 15 စဉ်အတွင်း 2017% အထိလျှော့ချကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေး၏အမှုများကိုရှစ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဗ္ဗဒူလာ Khalifa Al-ရွှင်လန်းသော, တပ်မှူး-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒူဘိုင်းရဲ, ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို၏ 86% ဖြေရှင်းနိုင်သောအင်အားစုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ 2020 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားအလွန်အဆင့်မြင့်ရဲတွေနဲ့ '' သင်္ဘောတက် beefs [ ... ]
ဒူဘိုင်းသမိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေး 1833 ကတည်းကအဆိုပါနန်းသက်အယ်လ် Maktoum မိသားစုဒူဘိုင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ပညာနှင့်တိုးတက်သောခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ, ဒူဘိုင်းပြုစုထားပါတယ်ကြောင့်အိန္ဒိယခွဲတိုက်ကြီးရန်, နှင့်တောင်အာဖရိကမှအ CIS နိုင်ငံများတွင်အဲဂုတ္တုပြည်ကနေကြက်တစ်ဒေသအဘို့ယခုစီးပွားရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ် Maktoum မိသားစုကနေအဋ္ဌမအုပ်စိုးသောမင်း, နှောင်းပိုင်းသူ့ဖွဲ့ရှိတ် Rashid bin ကို Saeed Al Maktoum, 1958 ကနေဒူဘိုင်း၏အကဲအမှူး - 1990, သနားကရုဏာနဲ့နားလည်မှုနှင့်အတူအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုလမ်းပြတော်မူ၏။ သူကယနေ့သည်နာမည်ကျော်, သာယာဝပြောတဲ့မြို့တော်သို့ဒူဘိုင်းအသွင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်သောဘာသဘောပေါက်လာတယ်။ ဒူဘိုင်းသမိုင်းနှင့်အတူရှိတ် Rashid: ရှိတ် Zayed bin Sultan Al-Nahyan အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏အသင်းချုပ်တည်ထောင်ခြင်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကစားခြင်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ အောက်ပါ [ ... ]